यी दुई खाना एकसाथ खाँदा ज्यानै जान सक्छ, थाहा पाइराख्नुस् ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्य समाचारयी दुई खाना एकसाथ खाँदा ज्यानै जान सक्छ, थाहा पाइराख्नुस् !
एजेन्सी, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौ । त्यसैले आजकाल हामी खाना प्रति निकै सचेत हुने गर्दछौ । हामीले खाने खानाका विषयमा सचेत हुनु जरूरी पनि छ । हामीले खाने कुनै-कुनै खाना साथमा खाँदा हामीलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ । हामीले खाने कुनै खानासँगै खाँदा त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने गर्छ । आज यहाँ यस्ता खानाका बारेमा जानकारी दिँदैछौ, जुन खानाहरू एकै साथमा खाँदा त्यसले फाइदा होइन बेफाइदा गर्छः– कोल्डड्रिङ्क्स पिएपछी पानमसला खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन ।
तिते करेला खानुहोस्, यी रो’गबाट छुटकरा पाउनुहोस्
नर्सले नै पाइनन काठमाडौंमा उपचार, अस्पतालबाट रुदै निस्किन !
सिस्नोका १५ फाइदा
गुल्मीमा २८९ जनामा ए’चआइभी सं’क्रमण: सबै भन्दा धेरै सत्यवतीमा, कहाँ कती ? हेर्नुस
यस्ता छन् सामान्य रुघाखोकी र कोरोनाभाइरसका लक्षणमा भिन्नता
के कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने बित्तिकै मान्छे म’रिहाल्छन् ?
६३७२ पटक पढिएको
२९७९ पटक पढिएको
२२५५ पटक पढिएको
२०५२ पटक पढिएको